RadioMBC – RadioMBC
Home > Author: RadioMBC
काठमाण्डौ चैत १५ नेपालमा शनिबार थप एक जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालयमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा मन्त्रालयका प्रवक्ता विकास देवकोटाले बेल्जियमबाट कतार हुँदै काठमाडौं आएकी २२ वर्षीया युवतीमा कोरोना भाइरस पुष्टि भएको बताए। उनको घर बाग्लुङ भएको बताईएको छ । यस अघि फ़्रान्सबाट आएकी एक युवती चाईनाबाट र दुवईबाट आएकाहरुमा केरोनाको
बुटवल चैत्र १५ । लुम्विनी प्रादेशिक अस्पताल र कोरोना बिशेष अस्थायी अस्पतालका लागि थप जनशक्ति आवश्यक भएमा निजी स्वास्थ्य संस्थाहरुबाट सहयोग रहने जनाएका छन । लुम्विनी प्रादेशिक अस्पतालमा सम्पन्न प्रादेशिक अस्पताल,चिकित्सक संघ, सामुदायिक र निजी संस्थाहरुको बिच सम्पन्न बैठकले यसक्षेत्रमा रहेका सरकारी अस्पतालहरुका लागि आवश्यक चिकित्सकहरु निजी तथा सामुदायिक अस्पतालहरुले सघाउने
बुटवल चैत १५ । तिलोत्तमा नगरपालिकाले लकडाउनको अवधीमा खटने कर्मचारीलाई ७५ प्रतिसत सम्म भत्ता दिने जनाएको छ | सरकारले लकडाउन गरेको अवधीमा खटेका कर्मचारीहरुलाई उक्त भत्ता दिने तयारी नगरपालिकाको छ । नगरपालिकामा रहेका कर्मचारीहरुलाई ५० देखि ७५ प्रतिसत सम्म भत्ता थप गर्ने सोचमा छौं नगर प्रमुख बासुदेव घिमिरेले भने । लकडाउनको अवधीमा खटने
बुटवल वर्तमान लकडाउनको असहज परिस्थितीलाई मध्यनजर गरी बुटवल उपमहानगरले हरियो तरकारी किनबेच हुने स्थल तोकेको छ । हाटबजार बन्द भएपछि हरियो तरकारी किन्न र बेच्नका लागि गार्हो भएको महशुस गरी उपमहानगरले सार्वजनिक स्थलको चोकमा भिडभाडा नहुने गरी तरकारी किनबेचको प्रबन्ध गरेको हो । तोकिएको स्थानहरुबाट थोक खरिद गरि ठेला, डोको वा टोकरीमा राखी
१५ चैत, काठमाडौं । भारतमा कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) बाट संक्रमित हुनेहरुको संख्या नौ सय नाघेको छ । शनिबार मात्र भारतमा १५ नयाँ संक्रमित फेला परेका छन् । यसअघि शुक्रबार १६० नयाँ संक्रमित देखिएका थिए । शुक्रबार भारतमा एकैदिनमा अहिलेसम्म सबैभन्दा धेरै मानिसमा यो भाइरसको संक्रमण देखिएको हो । भारतको सबैभन्दा प्रभावित राज्य
काठमाण्डौ - नेपाल एअरलाइन्सको जहाज आज चीन गएको छ ।सरकार र नीजि क्षेत्रले चीनमा खरिद गरेका औषधी र मेडिकलजन्य सामग्री लिन वाइडबडी जहाज आज दिउँसो साढे १२ बजे चीनको ग्वान्झाउका लागि उडेको हो । औषधी र अन्य मेडिकल सामग्री बोकेर जहाज आजै राति ११ बजेको हाराहारीमा नेपाल फर्कने छ ।जहाजले
काठमाण्डौ - कोरोनाको शंका लागेका बिरामीको स्वाबको नमुना लिन नेपालगञ्ज गएको नेपाल वायुसेवा निगमको जहाज दुघर्टनामा परेको छ ।नेपालगञ्ज विमानस्थलमा वाइ १२ जहाज अवतरणको क्रममा विमान चिप्लेर घाँसे मैदानमा पुगेको छ । दुघर्टनामा मानवीय क्षति नभएको नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले जनाएको छ । विमानमा सामान्य क्षति पुगेको छ । अब स्वाबको नमुना लिन नेपाल
२९ पुस, बुटवल । रुपन्देहीमा माछा पाल्ने किसानको संख्या वर्षेनी बढ्दै गएको छ । जिल्लाको छपिया क्षेत्र माछा उत्पादनका लागि प्रख्यात छ । जसलाई ‘माछा गाउँ’ कै रुपमा चिनिन्छ । तत्कालीन दयानगर गाउँ विकास समिति अहिले सियारी गाउँपालिका बनेको छ । यही गाउँपालिकामा सुरू भएको प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत ‘माछा
२८ साउन, काठमाडौं । तीन दिनसम्म स्थिर सुनको मूल्य मंगलबार पुनः एक हजारले बढेको छ । नेपाल सुनचाँँदी व्यवसायी संघले मंगलबारका लागि छापावाल सुनको प्रतितोला मूल्य ७१ हजार रुपैयाँ तोकेको छ । त्यस्तै तेजाबी सुनको मूल्य पनि तोलामा ७० हजार ७ सय पुगेको छ भने चाँदीको प्रतितोला मूल्य ८३५ रुपैयाँ कायम
काठमाडौँ — कुवेतमा अवैध ढङ्गले मदिरा भट्टी सञ्चालन गरेको आरोपमा चार जना नेपालीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेको छ । जसमा २ पुरुष र २ महिला छन् । कुवेती प्रहरीले कुवेतको जावेद अल मोहम्मद क्षेत्रमा नेपालीको अवैध भट्टी फेला परेको हो । यो क्षेत्रमा नेपालीको बाक्लो बस्ती छ । पक्राउ पर्ने दुई नेपाली महिला घरेलु कामदारको रूपमा कुवेत
इलाम — १६ औं सत्याग्रहमा रहेका डा. गोविन्द केसीलाई मुटुमा समस्या आएको चिकित्सकले जनाएका छन् । अस्वभाविकरुपमा मुटुको धड्कन बढ्नुका साथै निमोनिया पनि देखिएपछि उनलाई आज बिहान इलाम अस्पताल भर्ना गरिएको छ ।भर्नापछि भएको प्रारम्भिक परिक्षणको जानकारी गराउँदै मेडिकल सुपरिटेण्डेनट डा. विजेन्द्र कुमार शाहले सत्याग्रहको छैठो दिनमा देखिएको यो समस्या बढ्न सक्ने
लोक तथा दोहोरी गायक विष्णु खत्री जापानमा सम्मानित भएका छन् । घुम्टे युवा परिवार जापान शाखाले अग्रेजी नव वर्षको अवसरमा जापानमा पुगेका खत्रीलाई एक थान पियानो सहित दोसल्ला र प्रशंसा पत्रले सम्मान गरेको हो । नव वर्ष २०१९ को शुभ अवसरमा आयोजित अभिनन्दन तथा अन्तरकृया कार्यक्रममा गलकोट नगरपालिका ७ मल्म बागलुङमा
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूसहित यो सरकारका मन्त्रीहरु विरुद्ध धेरै षडयन्त्रहरु भइरहेको भन्दै जोगिएर काम गर्न निर्देशन दिएका छन् । मन्त्रिपरिषदको पछिल्लो बैठकमा प्रधानमन्त्री ओलीले मन्त्रीहरुलाई होस पुर्‍याएर बोल्न र काम गर्न निर्देशन दिएका हुन् । प्रधानमन्त्रीको भनाइ उधृत गर्दै एक मन्त्रीले भने-अहिले हाम्रोविरुद्ध निकै ठूलो षडयन्त्र भइरहेको छ । कुनै
बुटवल, ५ पुस । अशोक लेल्याण्डकाे नेपालका लागी आधिकारिक विक्रेता आ.एम.ई मोटर्सले एल सि भि सेग्मेन्ट अन्तर्गतकाे दोस्त प्लस गाडी आज बुटवलमा एक कार्यक्रमकाे आयाेजना गरि सार्वजनिक गरेको छ । आफ्नै सर्भिस सेन्टर पत्थरडाँडामा आयाेजित कार्यक्रममा दोस्त प्लस गाडीकाे जानकारीका साथै बिक्री सुरु गरेकाे छ । एलसिभि सेग्मेन्ट प्रमुख शुसिल थापाले नेपालकाे
सवारी चालक अनुमतिपत्रमा रहेको चिप (धातुको टुक्रा) झर्दा सेवाग्रही हैरान छन् । कमजोर गुणस्तरका कारण चिप झर्ने गरेको यातायात व्यवस्था कार्यालय, प्रदेश नं ३ कार्यालयले जनाएको छ । टुक्रा खसेको गुनासो लिएर दैनिक सेवाग्राही आइरहेको शाखा अधिकृत रमेश पौडेलले बताए । उनले भने, “हामीले विभागलाई यसबारे जानकारी गराएका छौँ ।” चालक
काठमाडाैँ, मंसिर ७। चाडपर्व लगायत बिबिध कारण देखाउंदै रोकिएको स्मार्ट लाइसेन्सको आबेदन आज (शुक्रबार) बाट खुलेको छ । यातायात व्यवस्था विभागले यस अघि नै देशैभर लाइसेन्सको फारामका लागि अनलाइन आबेदन अनिवार्य गरिसकेको छ । त्यसकारण घर/ कार्यालयबाटै लाइसेन्सका लागि आबेदन दिन सकिन्छ। लामो अवधिपछि आवेदन खुलेकाले सर्भरमा समस्या आउने सक्ने सम्वन्धमा समेत
डडेल्धुराको बस दुर्घटना हुँदा मृत्यु हुनेको संख्या १८ पुगेको छ। २७ जना घाइते भएका छन्। उग्रतारा मन्दिरको मेला हेरेर डोटी फर्किने क्रममा डा. केआई सिंह राजमार्गअन्तर्गत अमरगढी नगरपालिका–११ रडुवा खोलामा बिहिबार बेलुका करिब ५:४० बजे दुर्घटनामा परेको थियो। दुर्घटनामा १३ पुरूष र ५ जना महिलाको मृत्यु भएको उपक्षेत्रीय अस्पताल डडेल्धुराका मेडिकल सुपरिटेन्डेन्ड
तिलोत्तमा नगरपालिका, नगर कार्यपालिकाको ४८ औं बैठकले अस्पताललाई वडा नं. ४ स्थित दश नम्बरमा रहेको दश विगाहा सार्वजनिक जग्गा उपलब्ध गराउन सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो । गौतमबुद्ध सामुदायिक स्वास्थ्य संस्था, बुटवलले तिलोत्तमा नगरपालिकालाई यहीँ मंसिर ३ गते मुटु अस्पताल भवन निर्माणका लागि जग्गाको व्यवस्था मिलाइदिन पत्र दिएको थियो । विगत पाँच
पाली लेग स्पिनर सन्दिप लामिछानेले टि-१० क्रिकेटको डेभ्यु खेल मै सनसनिपुर्ण पर्दर्शन गर्दै म्यान अफ द म्याचको ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेका छ्न । ईन्डियन प्रिमियर लिग (आईपिएल) बाट व्यबसायिक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट सुरुवात गरेका सन्दिप लामिछाने पहिलोपटक फ्रेन्चाईज टोलि सहभागी प्रतियोगिताको खेलमा म्यान अफ द म्याच घोषणा भएका हुन । युएईमा सम्पन्न टि-१०
दक्षिण कोरिया, २१ नोभेम्बर । दक्षिण कोरियामा फेरि एक नेपालीको सुतेकै अवस्थामा निधन भएको छ । खोङ्जुसी खेरङ्म्यन क्षेत्रमा कार्यरत उदयपुर कटारीका दिपक कार्कीको निधन भएको हो । साझ कार्कीसँगै काम गर्ने साथीले बिहान ड्युटी जाने समयमा नउठेपछि बोलाउँन जाँदा उनी मृत भेटिएको बताइएको छ । इपिएस मार्फत ६ महिना अघि कोरिया आएका